एनआरएन पासपोर्टको बारेमा सरकारले सोचेको छैन – परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली – Everest Times News
एनआरएन पासपोर्टको बारेमा सरकारले सोचेको छैन – परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
२०७५ भाद्र ५, मंगलवार ०८:१५
काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली(एनआरएन)ले नेपाली नागरिकता पाउने भएका छन् । सरकारले एनआरएनले नागरिकता पाउने गरी बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको छ ।
गृहमन्त्रीकोसमेत जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले उक्त विधेयक साउन २३ गते बुधवार संसदमा पेश गरेका हुन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा इन्डोनेसियाको भ्रमणमा रहेका बेला पोखरेलले विधेयक संसदमा पेश गरेका हुन् ।
मुलुकी ऐनमा दफा ७ क थप गरी गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने शीर्षकमा एनआरएनको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’
पासपोर्ट पाउने कि नपाउने ?
संसदमा दर्ता भएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ले एनआरएन नागरिकताको पनि व्यवस्था गरेको छ । तर एनआरएन नागरिकता पाएकोले पासपोर्ट पाउने कि नपाउने ? पासपोर्ट नदिएमा एनआरएन नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिक भएको हिसाबले विदेशी पासपोर्ट चलाउनु पर्ने हुन्छ ।
विदेशी पासपोर्ट चलाएपछि नेपाल आउँदा अन अराइभल भए पनि भिसा पक्कै लिनुपर्छ । कि एनआरएन नागरिकता देखाएपछि भिसा नलिई नेपाल आउने सुविधा दिने हो ? यो विषयमा संसदमा पनि प्रश्न उठेको छ र यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यस्तो जवाफ दिएका छन् ।
‘गैरआवासीय नेपालीहरुको हकमा के गर्ने ? पहिले यो नागरिकता ऐन पारित होस । उहाँहरुले प्राप्त गर्ने त्यो नागरिकता जो राजनीतिक अधिकारबाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेगरी प्रस्तावित गरिएको छ । त्यसपछि यसबारेमा सोचौला । पासपोर्टको बारेमा अहिले सरकारले खासै सोचेको छैन,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भने ।